The Flash Zvinoda iwe guta kukwira sezvo imi ari uchitsanya murume panyika aripo kuponesa Budiriro kubva chazezesa matsotsi. Chimiro Barry Allen ndeimwe yakakurumbira vatambi vose DC enyaya American enyambo dzino. Captain Cold, Mirror Master, uye Gorilla Grodd vanoratidzwa sezvo matsotsi game uye mumwe nomumwe wavo anopa zvakawanda zvinonakidza bhonasi zviri munyika slots.
The musiki ichi slots inoshamisa ndiyo NextGen Gaming. Kambani vakapinda kukura uye mazano uchitamba mutambo wacho Software kuti playing mitambo kubva 1999. Games like The Flash Ngavave ari indasitiri. Kambani anogara kuedza rokuvaka bhizimisi rayo nokufunga idzva uye inonakidza nzira kuita mitambo yavo mafaro yakazara apo Nokuchengeta zvinokosha slots uchitamba mutambo wacho. Kambani yacho nokudzorwa UK kubheja komisheni.
Designed pamusoro 5 Gwenzi, The Flash asaita 50 paylines. The Wild bhonasi chiratidzo ndiko The Flash Icon iyo chinobatsira kukwevera richakunda mubatanidzwa pamusoro penyu 3x multiplier. The Pararirai chiratidzo ndechimwe Flash mufananidzo mheni. Inogona kutsiva mumwe zviratidzo zvose kunze bhonasi uye nezvikara chiratidzo uye ubayire 5000 Mari kana iwe vanogona kusvibisa vaviri pamusoro richakunda payline.
The feature of bonus bets in the game brings more wild symbols and hence more winning combinations are up for grabs. Ivo vabayire 5x multiplier ako Unobata zvose. The vakasununguka Tunoruka rowana Zvisinei ndikupei 10x multiplier nokuda Unobata zvenyu. Mamwe zviratidzo ndivo mureza kadhi zviratidzo. Pakati zvimwe zvinonakidza ndivo Remake uye Rogue kuti dzinoti. kuwana 3 kana kupfuura bhonasi zviratidzo pamusoro Gwenzi panguva bhonasi vachibhejera zvinhu kuchiitwa, imi vari ajaira Captain Cold, Gorilla Grodd , uye Mirror vaTenzi kuchiitwa. The Captain Cold inopa kuoma nechando kuwedzera remake ane vakasununguka Re-kuruka. Gorilla Grodd, zvisinei, anokuudza kurongwa teleporting remake inoratidza uye Mirror Tenzi anoita iwe kushanyirazve rako rokupedzisira 4 vakasununguka Tunoruka.
Kutarisa zvakawanda zvinofadza zviri munyika slots, The Flash ndiwo raparadza guru pamusika. saka, kugadzirira kuti kuhwina spree! Imi muri kufarira zvinoshamisa mufananidzo unhu, hunoshamisa inzwi uye aakatipa Graphics vari slots ichi. Muri akasungwa kuda kunoshamisa 3D Graphics uye jackpots chokwadi hombe, saka imi zvirokwazvo havagoni kumirira zvimwe!